GỤỌ NKE Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Ossetian Persian Polish Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu
OWEN, bụ́ nwata nwoke dị afọ abụọ na ọkara, nọ na-egwuri egwu n’ọnụ ụlọ ịsa ahụ́ dị n’ụlọ ha. Ọ rịgooro n’ebe aka ya ga-eru na kọbọd a na-etinye ọgwụ bụ́ nke nne na nna ya chere na aka ya agaghị eru. N’ihe ndị dị n’ime kọbọd ahụ, ọ hụrụ otu karama dọọrọ mmasị ya. O mepere ya ma ṅụọ ihe dị n’ime ya. Ebelebe gburu.
Ihe dị n’ime karama ahụ bụ acid na-erikasị ahụ́, n’ụzọ dịkwa mwute, obere Owen nwụrụ. Obi gbawara nne na nna ya. Nna ya, bụ́ Percy, gara ka ụkọchukwu chọọchị ya kasie ya obi. Ọ jụrụ, sị: “Gịnị mere ihe a ji mee?” Ụkọchukwu ahụ zara, sị, “Chineke chọrọ obere mmụọ ozi ọzọ n’eluigwe.” N’ịbụ onye nwere oké mwute, nna Owen chere na nke a ezighị nnọọ ezi. Chineke ò zubere n’ezie ka ọdachi dị otú ahụ mee? Percy ji iwe kpebie na ya agaghị aga chọọchị ahụ ọzọ.
N’ịtụgharị uche n’ihe merenụ, Percy chere, sị: ‘Obere nwa m ọ̀ ka na-ata ahụhụ? Ọ̀ dị mgbe m ga-ahụ ya ọzọ?’
Ọ pụrụ ịbụ na gị onwe gị echewo echiche banyere ihe na-eme mgbe mmadụ nwụrụ, ma ọ̀ ga-ekwe omume ijikọtaghachi anyị na ndị anyị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ n’ọdịnihu. Okwu Chineke, bụ́ Bible, zara ajụjụ ndị a. Bible nwere azịza ndị doro anya na ndị na-akasi obi maka ndị nile ọdachi ndị yiri nke a dakwasịrị. Nke ka mkpa bụ na ọ na-ekpughe atụmanya dị ebube nke Chineke kwere ná nkwa—mbilite n’ọnwụ.
Biko gụọ isiokwu na-esonụ iji mụtakwuo banyere olileanya a magburu onwe ya.